Shiinaha Salmonella Imtixaan qaadayaasha iyo alaableyda | Liming Bio
Dareenka sarreeya (89.8%), gaar ahaaneed (96.3%) ayaa lagu caddeeyey iyada oo loo marayo 1047 tijaabooyin caafimaad oo leh 93.6% heshiis marka la barbar dhigo habka dhaqanka.
Si fudud loo socodsiin karo
Nidaam hal-tallaabo ah, looma baahna xirfad gaar ah.
Kaliya 10 daqiiqo ayaa loo baahan yahay.
Gaar ahaan 96.3%
Qiyaasta Qalabka = 20 imtixaanno
Faylka: Manuals / MSDS
Salmonella waa jeermis sababa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee la isku qurxiyo (mindhicirka) infekshannada adduunka ku dhaca - Salmonellosis. Iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu badancudurka bakteeriyada ee caadiga ah ee ka dhasha cuntada ayaa la soo sheegay (badanaa waxoogaa yar ayuu ka yaryahay sida caadiga ah Caabuqa Campylobacter). Theobald Smith, wuxuu helay culeyskii ugu horreeyay ee cudurka Salmonella –Salmonella cholerae suis – in 1885. Tan iyo wakhtigaas, tirada noocyada (farsamo ahaan loo yaqaan serotypes ama serovars) ee Salmonella oo loo yaqaan inay sabto salmonellosis ayaa leh ku kordhay in ka badan 2,300. Salmonella typhi, culeyska sababa qandho-xumada,waxay caan ku tahay wadamada soo koraya halkaasoo ay kudhacayaan ilaa 12.5 milyan oo qof sanadkiiba, Salmonella enterica serotype Typhimurium iyo Salmonella enterica serotype Enteritidis sidoo kale waxaa badanaa la soo sheegaa cuduro. Salmonella ayaa sababi kartasaddex nooc oo jirro ah: calool-mareenka, qandho-xumada, iyo bakteeriyada. Ciladda lagu ogaado Salmonellosis waxay ka kooban tahay go'doominta bacilli iyo bandhigga jirka. Go'doominta bacilli waa waqti aad u badanogaanshaha antibody-ka si gaar ah looma oga.
Imtixaanka Degdega ah ee Salmonella Antigen wuxuu Salmonella ku ogaadaa iyadoo la adeegsanayo muuqaal ahaan fasiraadda horumarinta midabka ee xariijimaha gudaha. Anti-salmonellaunugyada difaaca jirka ayaa ku dhaqdhaqaaqi doonin gobolka baaritaanka xuubka. Inta lagu guda jiro imtixaanka, kaMuunada waxay la falgashaa unugyada anti-salmonella ee jirka iskuxidhxeen jajabyada midabada leh oo lagu duubay suunka isku xidhka ee baaritaanka. Isku darku markaa wuu haajiraaiyada oo loo marayo xuubka iyada oo la adeegsanayo ficil ficil leh isla markaana la falgalaya reagent ka xuub Haddii salmonella ay ku filan tahay tijaabada, koox midab leh ayaa sameyn doontafoomka ku yaal gobolka baaritaanka xuubka. Joogitaanka kooxdan midabka lehwaxay muujineysaa natiijo wax ku ool ah, halka maqnaashaheeda ay muujineyso natiijo taban. Themuuqaalka koox midab leh oo ku taal aagga koontaroolka ayaa u adeegta sida xakamaynta nidaamka, taasoo muujinaysa in mugga saxa ah ee tijaabada lagu daray iyo xuubka jeexan ayaa dhacay.
Hore: Tijaabada Rotavirus
Xiga: Tijaabada Vibrio cholerae O1
Salmonella Antigen Tijaabada Degdega ah
Tijaabada Degdega ah ee Salmonella Typhi Antibody
Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah,